AFAAN KEENYAA AFAAN MEESHAA KADHATTOOTAA MITI-Bilisummaa Kumaatiin! – Beekan Guluma Erena
AFAAN KEENYAA AFAAN MEESHAA KADHATTOOTAA MITI-Bilisummaa Kumaatiin!	Beekan Erena
Poems June 12, 2016
115SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Afaan Oromoo afaan ittiin kadhatan miti!
(Warra caccabsanii afaan Oromoon kadhataniif)
Kan wal nu hin gaafachiifne,Oromoon hin kadhatu akkatti kadhatanis hin beeku. Egaa yaa ta’u malee jabana kana darbee darbee sababa invastimantii fi Oromoo lafasaarraa buqqasuu irraan kan ka’e qonnaan bultoonni keenya darbanii darbanii maatiin harkaa bittinnaa’ee asiif achi jooree waan fidan yommuu dhaban kadhaaf karaarra taa’uu filatu. Kun yaa jiraatu malee Oromoo biratti safuu guddaa fi qaanii guddaa akka ta’e marti keenyayyuu ni beekna. Ta’us kadhaan filannoo nama baasu miti,namas hin guddisu,namaafis hin sifaa’uutii,filannoo gaarii kan ta’u maatii ofii waliin akkuma aadaa fi duudhaa Oromoo duriitti mudhii hidhatanii dafqa ofii xuruursanii gad jedhanii hojjechuutu furmaata. Kanaaf,adaraa kan isiniin jennu,warri kadhataan tokko Oromoo ta’uusaa agartan akka cimee hojjetuuf fi kadhaan aadaa Oromoo akka hin taane jala sararaa itti himaa,nuti hin kadhannus,kadhachuus hin aabnu warri kadhaaf uumaman kanneen nuti hundi keenya beeknu haa kadhatan malee,isaaniinis hin gargaariinaa! kana keessatti garuu wanti ilaaluu qabnu namtichi Oromoo ta’ee kadhatu kun, tarii qaama miidhamaa hammeenya qabu ta’uu mala,garuu namticha kana gargaaruun gaarii ta’uu otoo maluuyyuu akka afaan keenyaan hin kadhanne itti nuuf dhaamaa,afaanuma kadhaaf baratame saniin caccabsaniis haa ta’u isuma afaan kadhaaf waltaawaa ta’e saniin “ስለ…” jedhee yaa kadhatu!. Isa qaamaan fayyaa ta’ee hojii jibbee kadhaaf karaa dhiphisummoo ittis hin kenniinaa,akka afaan keenyaan hin kadhannes itti nuuf dhaamaa,galee hojjetee dafqee haa jiraatuutii!
Kan biraammoo kan nama jibbisiisu qaamaan fayyaa guutuu ta’ee otoo jiruu hojii jibbee,namasaa jibbee,biyyasaa jibbee isa Goondar, goojjam, d/maarqoos, Faasiil, saqoxaa…adigraat,maqalee…. walaayittaa,gaamoo,goofaa,gimiraa,kooyraa,kafaa,…fi bakkeewwan adda addaarraa dhufanii lafa Oromiyaa dhiphisanii ofiifis,nuunis nu dhiphisanis tokkoon tokkoon isaanii biyya isaaniitti akka galan akeekkachiisaa!…Oromiyaan biyya kadhaa miti,biyya badhaadhinaati malee! Oromiyaan uumaadhumaanuu nama fayyaa otoo hin taane rakkataa gargaaruutu aadaadha! Kanaaf isaanis akka kadhaadhaan nu hin rakkisneef furmaannis numa harka jira!
kana birattuu,Oromoo ta’uu dhabuu isaanii waan beekaniif sirumaa afaan keenya baruuf yeroo yaalantu jira,ittiin nu kadhachuuf!….hhhh…gaafa rakkoo isaaniimmoo afaan keenya baruuf hiixatu,yeroo dhimmi Oromoo lafaa ka’uu fi Waa’een afaan Oromoo dubbatamu mataa isaan dhukkubsahoo!…garuu maaliif? Kun nuufis hin ta’u,yeroo rakkoo ofii… kanaaf warri akkasii lafa keenya lakkisanii bakka dhufanitti deebi’anii akka kadhatan,yookaan akka hojjetanii jiraatan murtoo dabarsaafii,,,,silaas kadhaa baranii akkamitti nama dhagahuu miti malee!. Maraafuu dirqamni keenya akeekkachiisuudha,al tokko hamilee isaanii
tuqnaan asiis baduu danda’uhoo!
Egaa akka ta’ee,warri afaan keenyaan kadhachuuf afaan keenya caccabsanii ittiinis kadhatan achumatti daaraa haa ta’an,nuti afaan keenya kadhaaf dabarsinee hin laannu!. Waaqa ittiin kadhachuuf garuu karaan bal’aadha!. Kanaaf Afaan Oromoo afaan kadhaa otoo hin taane,afaan Ulfinaaf kabajaa ta’uusaa fi akkasumas Oromiyaan biyya kadhaa otoo hin taane,biyya badhaadhinaata’uushee hundi akka nuuf baru bakka jirtanitti nuuf beeksisaa!
Hunda keenyayyuu waaqni kadhaa jalaa nu haa baasu,nu haa baraaru!…nama dafqasaa dhangalaasee nyaatus nu haa taasisuun dhaamsakooti!. Dhumarratti garuu,warra humna hin qabnee fi qaama miidhamtoota hojjechuu hin dandeenye gargaaruun waaqaanis,namaanis eebbifamaa nama taasisa hanga giphiidhaa qabdan gumaachaafii,otoo qabanii arganii bira taruunuu cubbuudhaatii!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa115SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← BOONAA FI BOONTUU-RABBUMAA‬ GETAACHOO GUDDATAA’tiin-#‎SEENAA‬ MI’OOFTU JAALALA DHUGAAF JECHA WAADA WALIIF SEENAAN OSOO HIN CABSINE WALIIF DU’ANII
Asoosama Mi’aawaa Kana Dubbistaniittuu (Prev.Post)-Barreessaa : Beknan Rabira’tiin →